FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY ALIKA MPIANDRY FOTSY AMERIKANA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny alika mpiandry fotsy amerikana
Boba Fett ilay mpiandry ondry fotsy amerikana amin'ny taona 1
Mpiandry fotsy amerikana-kanadiana
Mpiandry Alemanina Soisa Fotsy
Mpiandry Ondry Fotsy
Mpiandry Alemanina Fotsy
Alika mpiandry fotsy
Ilay mpiandry ondry fotsy amerikana dia mitovy amin'ny a Mpiandry Alemanina afa-tsy ny loko. Manana palitao henjana, lava na lava volo izy io. Ireo karazany lava volo dia tsy manana akanjo lava. Fotsy foana ny loko.
Ny mpiandry ondry fotsy dia be herim-po, mailo, mailaka ary tsy matahotra. Faly sy mankato ary mazoto mianatra izy ireo. Matoky tena, matoky tena, matotra ary hendry, mpiandry ondry fotsy hoditra dia mahatoky sy be herim-po tokoa. Tsy hieritreritra indroa momba ny fanomezana ny ainy ho an'ny fonosin'olombelona izy ireo. Manana fahaizana avo lenta izy ireo. Ny mpiandry ondry fotsy dia tia ny ho akaiky ny fianakaviany, nefa afaka mitandrina amin'ny olon-tsy fantatra. Mila ny olony ity karazany ity ary tsy tokony havela hitokana mandritra ny fotoana maharitra. Mibolisatra fotsiny izy ireo rehefa mahatsapa fa ilaina izany. Ampiasaina matetika ho toy ny alika polisy, ny mpiandry ondry fotsy dia manana toetra voaaro miaro tena mafy, ary tena mahatoky amin'ny mpikarakara azy. Natao sosialy ity karazany ity dia manomboka tsara amin'ny alika kely. Ny herisetra sy ny fanafihana ny olona dia vokatry ny tsy fahaiza-mitantana sy ny fampiofanana. Mipoitra ny olana rehefa avelan'ny tompony hino ny alika mpitarika fonosana ny olona ary / na tsy manome ny alika ny fampihetseham-batana ara-tsaina sy ara-batana isan'andro mila milamina izany. Mila tompona ity karazana ity manam-pahefana ara-dalàna ambonin'ilay alika amin'ny fomba milamina, fa hentitra, matoky tena ary tsy miovaova. Ny alika marin-toerana, voalamina tsara ary voaofana dia amin'ny ankapobeny tsara amin'ny biby hafa ary tsara amin'ny ankizy ao amin'ny fianakaviana. Tokony hofanina tsara amin'ny fankatoavana hatramin'ny fahazazany izy ireo. Mpiandry Ondry fotsy manana tompona mazoto sy / na tsy tanterahina ny sain-dry zareo dia mety ho saro-kenatra, tsy hahatsiaro tena ary mety hatahorana hanaikitra ary hampivelatra olana miambina . Tokony ho izy ireo Ampiofanina ary nifanerasera hatramin'ny mbola kely. Ireo mpiandry ondry fotsy dia tsy hihaino raha mahatsapa izy ireo fa matanjaka kokoa noho ny tompony izy ireo, na izany aza tsy handray tsara ny fifehezana henjana. Ny tompona dia mila manana rivotra manam-pahefana voajanahary amin'ny fihetsiny. Aza mitsabo an'io alika io toy ny hoe olombelona izy . mianatra instincts canine ary karakarao araka izany ny alika. Ny mpiandry ondry fotsy dia iray amin'ireo karazan-jaza mahay indrindra sy mora zahana. Miaraka amin'ity alika miasa tena mahay ity dia misy ny familiana hanana asa sy asa amin'ny fiainana ary a mpitarika fonosana tsy miova hanehoana azy fitarihana. Mila toerana hafa izy ireo handefasana ny heriny ara-tsaina sy ara-batana. Tsy karazana hahasambatra fotsiny ny mandry manodidina ny efitranonao na mihidy ao an-tokotany. Manan-tsaina tokoa ity karazany ity ary mianatra mora foana ka nampiasaina ho toy ny alika mpiandry ondry, alika mpiambina, amin'ny asan'ny polisy, ho torolàlana ho an'ireo jamba, amin'ny asa fikarohana sy famonjena ary amin'ny miaramila. Ilay Mpiandry Ondry Fotsy koa dia miavaka amin'ny hetsika alika maro hafa ao anatin'izany ny schutzhund, ny fanarahana, ny fankatoavana, ny hakingana, ny fanatanjahan-tena. Ny orony tsara dia afaka mamofoka zava-mahadomelina ary mpiditra an-tsokosoko , ary afaka mampitandrina ny mpikarakara ny fisian'ny toeram-pitrandrahana ambanin'ny tany ara-potoana mba hisorohana ny fanapoahana, na ny fivoahan'ny entona ao anaty fantsona nalevina 15 metatra ambanin'ny tany. Ny White Shepherd dia fampisehoana malaza sy mpiara-mitory amin'ny fianakaviana ihany koa.
Haavony: Lehilahy 24 - 26 santimetatra (60 - 65 cm) Vehivavy 22 - 24 santimetatra (55 - 60 cm)
Lanja: 77 - 85 pounds (35 - 40 kg)
Ny sasany amin'ireo aretina hita tamin'io karazany io dia ny hip sy elbow dysplasia (azonao antoka fa samy manana ny valahany ny ray aman-dreny ho toy ny OFA tsara) malabsorbtion Syndrome degenerative joint (anisan'izany ny osteochondritis) megaesophagus pannus sy ny karazana areti-maso (tsy fahita matetika ) bloat ny aretin-koditra (sakafo, parasy na rivotra) hafa hoditra na palitao olana ary nify tsy hita. Ny tsipika sasany an'ny Whites dia manana olana amin'ny aretina toy ny Lupus sy / na ny karazana aretina autoimmune, ary koa ny aretina miteraka fivontosana. Amin'ity fotoana ity dia tsy dia fahita firy ny olana autoimmune amin'ny karazany.
White Shepherds dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha ampiasaina tsara. Tsy mihetsika izy ireo ao an-trano ary manao tsara indrindra amin'ny tokotany malalaka farafaharatsiny.
White Shepherds dia tia hetsika mavesatra, tsara kokoa raha ampiarahina amin'ny fampiofanana sasany, satria ireo alika ireo dia tena marani-tsaina ary maniry fanamby tsara. Mila entina isan'andro, haingana, mandeha lavitra , mihazakazaka na mihazakazaka eo akaikinao rehefa mandeha bisikileta ianao. Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Ny ankamaroan'ny mpiandry dia tia milalao baolina na Frisbee. Folo ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo minitra fakana sary miaraka amina fitsangantsanganana isan'andro dia handreraka ny alikanao ary hanome azy tanjona kendrena. Na fanenjehana baolina, fisamborana Frisbee, fanofanana fankatoavana, fandraisana anjara amin'ny vondrona playine an-tsoavaly na fitsangatsanganana / jogging lava fotsiny dia tsy maintsy vonona ianao hanome endrika fanazaran-tena isan'andro. Ny fanazaran-tena isan'andro dia tsy maintsy misy hatrany ny diabe / jogging isan'andro hanomezana fahafaham-po ny fifindra-monina alika. Raha tsy dia zatra loatra ary / na tsy voadinika ara-tsaina dia mety ho lasa io karazana io tsy milamina sy manimba . Mahavita asa tsara indrindra amin'ny asa atao.
Manodidina ny 12 taona
Ankizy 8 ka hatramin'ny 12 eo ho eo
Ity karazana ity dia mandatsaka sombim-bolo tsy tapaka ary mpanidina mavesatra amin'ny fizaran-taona. Tokony kosehina isan'andro izy ireo raha tsy izany dia hanana volo manerana ny tranonao ianao. Ny fandroana raha tsy ilaina amin'ny fandroana dia mety hiteraka fahasosorana amin'ny hoditra noho ny fihenan'ny solika. Zahao ny sofina ary alao tsy tapaka ny hombo.
Avy tany Etazonia, Kanada ary Eropa. Taranaka mivantana an'ny Alika mpiandry alemanina . Ny mpiandry ondry fotsy dia tsy mbola nifangaro tamina alika hafa hatramin'ny nanombohana an'i Amerika Avaratra. Mazava ho azy fa mbola tsy nisy karazana na karazany hafa nampiana mba hahatonga azy ireo ho fotsy. Ny fototarazo mifehy ny loko fotsy dia singa voajanahary amin'ny makiazy totalin'ny lokon'ny karazan'alika Shepherd Dog Aleman. Ny White Shepherd dia misoratra anarana tsy miankina amin'ny American White Shepherd Association any Etazonia.
AWSA = Fikambanan'ny mpiandry ondry fotsy amerikana
WGSDCV = Club Alika mpiandry alemanina fotsy any Victoria
WSSDCA = Klioban'ny Alika mpiandry soisa fotsy any Aostralia
Ny mpiandry ondry fotsy dia voasoratra anarana ho mpiandry ondry fotsy miaraka amin'ny American White Shepherd Association (AWSA) sy ny United Kennel Club (UKC). Ny Fédération Cynologique Internationale (FCI) dia nahafantatra azy ho a Berger Blanc Switzerland tamin'ny 2002, izay anarana mitovy amin'ilay ampiasain'ny White Swiss Shepherd Dog Club of Australia (WSSDCA) (amin'ny fandikan-teny). Niaiky ny Soisa ny White GSD ho karazana mitokana voalohany, ka izany no nanisana an'i Suisse ho firenena niaviany ary niova ny anaran'ny karazany hanehoana an'io.
Ny ankamaroan'ny klioba hafa dia misoratra anarana hoe a Alika mpiandry alemanina (fotsy) miantso ny loko fotsy ho lesoka tsy mendrika.
Truth the White Shepherd puppy amin'ny 11 herinandro
Doc sy Cindy GSD fotsy
Doc, Cindy sy ny fianakavian'alika
Fotoana fiomanana ho an'ireo alika kely!
Mandy the American White Shepherd amin'ny 8 volana
Hijery ohatra misimisy kokoa momba ilay Mpiandry Ondry Fotsy Amerikanina
Mpiandry fotsy amerikana sary 1
Mpiandry fotsy amerikana sary 2
Mpiandry fotsy amerikana sary 3
Mpiandry soisa fotsy
Mpiandry ondry fotsy soisa
st bernard sy laboratoara mifangaro
anjara laboratoara anjara lavaka omby
fifangaroan'ny pyrenees tsara collie mix
omby terrier mix pit bull
orona mena pitbull labrador mifangaro
zanak'ondry pekingese mainty sy fotsy